वैकल्पिक ऊर्जामा को बन्लान् कार्यकारी ?
काठमाडौं । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक छनोट प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुग्दा आवेदकहरू तीव्र दौडधुपमा लागेका छन् । सरोकारवाला जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मंसिर १ मा केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकका लागि २१ दिनको समयसीमा तोकेर आवेदन माग गरेको थियो । सो अवधिभित्र केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकका लागि ११ जनाले आवेदन दिएका थिए ।
आवेदन दिनेमा केन्द्रका कामु कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकाल, मधुसूदन अधिकारी, प्रमोद पोखरेल, डा. सरोज कोइराला, डा. बलबहादुर पराजुली, डा. बुद्धि नेपालीलगायत छन् । त्यसैगरी, डा. रवीन्द्र ढकाल, अनन्त घिमिरे, डा. लक्ष्मण पौडेल र धर्म जीसीलगायतले आवेदन दिएको बुझिएको छ । आवेदक दिनेहरूमध्येबाट छनोट समितिले सर्ट लिस्टिङ गर्ने र सोमध्ये एकजनालाई कार्यकारी निर्देशक तोकिने बताइएको छ ।
केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकका लागि मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, इन्जिनियरिङ वा ऊर्जासम्बन्धी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड छ । सो केन्द्रमा यसअघि रामप्रसाद धिताल र त्यसअघि गोविन्द पोखरेल कार्यकारी निर्देशकका रूपमा कार्यरत थिए । आवेदकहरूमध्ये केहीले सत्तारूढ दल नेकपाका विभिन्न नेताको साइनो सोझ्याउँदै दौडधुपलाई तीव्र पारेका छन् ।
केन्द्रका अहिलेका कामु कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकाल पूर्वएमालेका नेता नेत्र पन्थीका ज्वाइँ हुन् । अर्का आवेदक मधुसूदन अधिकारी पनि रूपन्देहीकै र एमालेनिकट पूर्वसहसचिव खडानन्द ढकालका ज्वाइँ हुन् । उनले पनि वामदेम गौतममार्फत लबिइङ गरिरहेको बताइएको छ । यता, प्रमोद पोखरेल त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्ष चैतन्य शर्माका ज्वाइँ हुन् । त्यस्तै, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा उनका विज्ञान प्रविधि सल्लाहकार रहेका डा. रवीन्द्र ढकाल पनि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकका प्रबल दाबेदार मानिन्छन् । मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका डिन भइसकेका दाङका अनन्त घिमिरेले सभामुख कृष्णबहादुर महरा र ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनको आश्वासन पाएको बुझिएको छ । त्यस्तै, लक्ष्मण पौडेल पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका प्राध्यापक हुन् । डा. सरोज कोइरालाले यसअघि लगानी बोर्डको प्रमुखमा पनि आवेदन दिएका थिए । बलबहादुर पराजुली वैकल्पिक ऊर्जामा जापानबाट पीएचडी गरेका हुन् । यीमध्ये कसले बाजी मार्छ भन्ने कुरा अहिल्यै भन्न नसके पनि यो मालदार स्थान भएकाले नाता नपर्ने र पैसा खर्च गर्न नसक्नेको भने सम्भावना कम भएको स्रोतहरूको दाबी छ ।
महान्यायाधिवक्ता खरेलको कारण झापाको नगरसभा सत्तारुढ नेकपा र नगरकै बहुमत सदस्यले बहिस्कार गर्ने
किन गए प्रधानसेनापति चीन ?
मन्त्रीहरूको अन्तिम परीक्षा